Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Ear Infections (2) နားပိုးဝင်ခြင်း (၂)
အလွန်အဖြစ်များတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ နှာရည်ယိုရာကနေ သိပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ကလေး အအေးမိသူထဲက ၆၁% မှာ နားပါ ရောင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတခုက ဆိုတယ်။ နားရောင်နေတာသေခြာအောင် နားကို ဆရာဝန်ကနေ Otoscope ကရိယာနဲ့ ကြည့်မယ်။
Inside Your Ear နားထဲမှာ
Eustachian tube နားပြွန်ရှိတယ်။ သူက Middle ear နားအလည်ပိုင်းနဲ့ Throat လည်ချောင်း (အာခေါင်) ကို ဆက်ပေးထားတယ်။ ပြွန်မှာ နှာခေါင်းထဲ၊ လည်ချောင်းထဲမှာလိုမျိုး Mucus အချွဲရှိတယ်။ ဒါရှိနေလို့ နားအလည်ပိုင်းကနေ အရည်ရှိရင် ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ နားထဲက ဖိအားကိုလည်း ထိန်းပေးတယ်။
Eardrum နားစည် ကောင်းနေဘို့က အရေးကြီးတယ်။
ကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းနေတဲ့ နားစည်က ကြည်လင်နေရတယ်။ ပန်းရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင် ရောနေသလို ရှိရတယ်။ ပိုးဝင်ထားတာဆိုရင် နီပြီး ရောင်နေမယ်။ Colds အအေးမိတာ၊ Flu တုပ်ကွေးမိတာ နဲ့ Allergies (အလာဂျီ) ရတာတွေကနေ နားပြွန်ကို ထိခိုက်စေပြီး ရောင်လာစေတယ်။
Fluid in the Ear နားထဲအရည်ဝင်ခြင်း
Eustachian tube နားပြွန်မှာ လာပိတ်ရင် အလည်နားထဲ အရည်တွေ အောင်းနေတော့မယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေ ဗိုင်ရပ်တွေ ပေါက်ပွါး များပြားလာလိမ့်မယ်။ ရောဂါရလာမယ်။ Pneumatic Otoscope ကရိယာနဲ့ လေနဲနဲသွင်းကြည့်ရင် လှုတ်လာရမဲ့ နားစည်က အထဲမှာ အရည်ရှိနေရင် မလှုတ်နိုင်တော့ဘူး။
Ruptured Eardrum နားစည်ပေါက်ခြင်း
အရည်တွေများလာရင် ဖိအားများလာမယ်။ ကြာတော့ နားစည်ပေါက်သွားမယ်။ Ruptured eardrum ဖြစ်နေရင် အဖြူ၊ အဝါ၊ အညို အရည်ထွက်လာမယ်။ နာတာကသက်သာလာမယ်။ သူ့ဖါသူ ၂-၃ ပါတ်နေရင် ပြန်ပိတ်နိုင်တယ်။ ခဏခဏ ပေါက်တာ ဖြစ်ရင်တော့ နားအကြားကိုပါ ရာသက်ပန် ထိခိုက်စေမယ်။
Ear Infection Symptoms ကလေးငယ်လေးတွေမှာဖြစ်ရင် သိဘို့ခက်တတ်တယ်။ မအိပ်နိုင်၊ မစားနိုင်၊ အငိုမတိတ်နိုင်တာ ဆိုရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ Ear Infection Symptoms နားပိုးဝင်ခြင်း လက္ခဏာတွေကတော့ -
• Piercing pain နားကို ထိုးဖေါက်သလို နာမယ်။ လှဲလိုက်ရင် ပိုနာမယ်။ အိပ်ရေးပျက်မယ်။
• Trouble hearing နားအကြားကို ထိခိုက်မယ်။
• Fever ကိုယ်ပူမယ်။ Fluid drainage from ears နားထဲက အရည်ထွက်မယ်။
• Dizziness ခေါင်းမူးမယ်။ Congestion နီရဲနေတာမြင်ရမယ်။
Home Care for Ear Infections အိမ်မှာ လုပ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ Warm washcloth အပူကပ်ပေးပါ။ Ear drops နားခပ်ဆေးလိုမယ်။ Painkillers အနာသက်သာဆေးတမျိုးမျိုး လိုမယ်။ ဥပမာ Ibuprofen နဲ့ Acetaminophen ဆေးတွေ။
Complications of Ear infections ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ
• Scarring of the eardrum with hearing loss နားစည် အမာရွတ်ဖြစ်မယ်။ အကြားထိခိုက်မယ်။ Speech and language developmental problems စကားပြော နောက်ကျမယ်။ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်မယ်။
Ear Tubes နားထဲ ပိုက်ထည့်ပေးခြင်း
Recurrent ear infections or fluid က တော်တော်နဲ့ မပျောက်ရင် ကလေး စကားပြောတာ နှေးစေမယ်။ Eardrum ကို Tubes ပိုက်ကလေး တပ်ထားပေးနိုင်တယ်။ Middle ear အလည်နားထဲက အရည်ကို ထုတ်ပေးနေလို့ သက်သာစေမယ်။ ၈-၁၈ လအထိ ထည့်ထားတတ်တယ်။ သူ့ဖါသူ ထွက်ကျလာတတ်တယ်။
Surgery to Remove the Adenoids တက်စေ့တွေရောင်ရင် ခွဲထုတ်နိုင်တယ်။
Adenoids တွေဆိုတာ လည်ချောင်း နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Glands (ဂလင်း) တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေရောင်လာရင် Eustachian tubes ကို ထိခိုက်စေမယ်။ Adenoidectomy ခွဲထုတ်သင့်တယ်။
Preventing Ear Infections ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
Common cold ကနေ အများဆုံးဖြစ်ရတယ်။ အအေးမမိအောင်နေပါ။ လက်ခဏခဏဆေးပါ။ ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးတွေ စနစ်တကျထိုးပါ။
အအေးမိတာလိုဘဲ Allergies (အလာဂျီ) ကနေ နားပိုးဝင်နိုင်တယ်။
Swimmer’s Ear ရေကူးသူတွေနား
ရေကူးနေရင်းယင်း ရေဖြစ်ဖြစ်၊ အမှုံ-အမှိုက်ဖြစ်ဖြစ် နားထဲဝင်ပြီး ပြန်မထွက်ရင် ဗက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွါးစေနိုင်တယ်။ နားအပြင်ပိုင်းမှာ နာတာ၊ ရောင်တာ၊ ယားတာတွေဖြစ်လာမယ်။ ရေကူးတာက မဟုတ်ဘဲ တခြား အခြေအနေတွေကနေလဲ အဲလိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ နားသန့်ရှင်းပေးရင် ထိခိုက်ရာကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Medicated ear drops နားဆေးခပ်ပါ၊ နားကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
Ear infections ဝင်တဲ့ ကလေး ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်သာလိုတယ်။ ကျန် ၄ ယောက်မှာ ၄၈ နာရီ နေရင် ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ ကလေးရဲ့ကိုယ်ခံစနစ်ကနေ ကောင်းအောင် လုပ်ပေးတယ်။ Bacterial ear infection အတွက် ပဋိဇီဝဆေးတွေက အသုံးကျတယ်။ Virus ကြောင့်ဖြစ်ရင် အသုံးမဝင်ဘူး။
Antibiotics for Ear Infections နားပိုးဝင်ရင် ဘယ်လို ပဋိဇီဝဆေးတွေသုံးနိုင်သလဲ
a. Bactrim and Septra
a. Cefdinir (Third generation oral cephalosporin)
b. Cefixime (Suprax)
c. Cefpodoxime = Vantin (Third generation cephalosporin)
d. Ceftriaxone (Third generation cephalosporin)
e. Cefuroxime = Ceftin (Second generation parenteral cephalosporin)
f. Cefzil (Cefprozil)
g. Lorabid = Loracarbef (Second-generation cephalosporin antibiotics)
5. Clarithromycin (Macrolide antibiotic)
7. Combination Antibiotics for Ear Infections
a. Pediazole (Erythromycin + Sulfisoxazole)
Posted by Dr. Tint Swe at 10:34 PM